Sideen ku ogaanayaa in lacagteydu eey aamin noqon doonto? : Dahabshiil Customer Portal
Solution home Somali FAQs Amniga iyo Asturnaanta
Sideen ku ogaanayaa in lacagteydu eey aamin noqon doonto? Print
Modified on: Sun, 6 Jun, 2021 at 7:20 AM
Lacagtaadu waxay ku jirtaa gacmaha aaminka ah ee Dahabshiil. Mashiinkayaga lacag bixinta wuxuu buuxiyaa heerarka u hogaansanaanta PCI-DSS, sidaa darteed, faahfaahinta kaarkaaga lacag bixinta waa la ilaaliyaa, halka nidaamkayaga lagu shaqeynayo iyadoo la adeegsanayo sirta heerka sare ee SSL-ka iyo gidaarrada lagu ilaaliyo si loo hubiyo in macluumaadkaaga si ammaan ah loogu gudbiyo.
Dahabshiil waa hay'ad maaliyadeed oo ruqsad buuxda haysata waxaana xukuma Hay'adda Iilaalinta Dhaqanka Maaliyada (FCA) ee Boqortooyada Ingiriiska.
Shirkadda Dahabshiil waxay adeegyo xawaaladeed ka waday Afrika muddo ka badan 40 sano. Dhammaan wareejinta shirkadda Dahabshiil waxaa lagu daboolay dammaanad 100% lacag-celin ah, taasoo ku siinaysa degganaan maskaxeed.